Umělá inteligence - အခမဲ့ပရီမီယံဂီတ themes များစျေးကွက် downloads,
အတုထောက်လှမ်းရေး	မှတ်ချက် Leave
အတုထောက်လှမ်းရေး (UI ကိုအင်္ဂလိပ်ကို Artificial Intelligence AI) ကိုအသိဉာဏ်အပြုအမူလက္ခဏာဖေါ်ပြခြင်းစက်တွေ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သိပ္ပံဌာနခွဲဖြစ်ပါသည်။ အများဆုံးစံအသိဉာဏ်လူ့အကြောင်းပြချက်ကိုအသုံးပြုသည်အဖြစ် "အသိဉာဏ်အပြုအမူ" ၏အဓိပ္ပါယ်, ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအယူအဆနှင့်အတူပထမဦးဆုံး 1955 ယောဟန်ဆက်မက်ကာသီသို့ရောက်ကြ၏။
Z ကိုpsychosociálního hlediska je umělá inteligence jednou z forem ne-lidské inteligence ။
အထူးသဖြင့်နေဆဲစာပေများတွင်အသုံးပြုသောလက်နက်ဖြစ်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကထောက်ခံထားတဲ့အထွေထွေအများသုံးဖြစ်ပြီး, အတုထောက်လှမ်းရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်အဘယ်အရာများကန့်သတ် defining ၏ဘေးဒဏ်အဝိဇ္ဇာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဟုတ်ဘူး "ဟုသိပ္ပံထူးအိမ်သင်" တွင်အတုထောက်လှမ်းရေး၏နားလည်မှု, ။ အတုထောက်လှမ်းရေးတစ်ဦးဆုံးမပဲ့ပြင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သောကြောင့်, ဤကန့်သတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် (တစ်ခါတစ်ရံမှော်ရနံ့) guesswork ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါဖျောပွန့်သတ်ချက်မရရှိနိုင်အတုထောက်လှမ်းရေးရှိကြောင်း tool များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအသငျသညျအတုထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ပါသည်ဘယ်သို့ဆိုရပေမည်။ artificial ထောက်လှမ်းရေးအသိဉာဏ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောလူ့လှုပ်ရှားမှုများ (လုပ်ငန်းစဉ်များ) ၏မော်ဒယ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤသည်လှုပ်ရှားမှုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ကြောင်းလူ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်ထုတ်ပေးသည်။ ယင်း၏စ (။ လယ်ပိုင်း 20 ရာစု) ကတည်းကဒီမော်ဒယ်နှစ်ခုလမ်းကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း:
1 ။ အသိဉာဏ်လူ့လှုပ်ရှားမှုများ၏ပြင်ပသရုပ်မော်ဒယ်
2 ။ လူ့ဦးနှောက်ဝေးအာရုံကြောကွန်ရက်များဖော်ထုတ်အဆောက်အဦမော်ဒယ်
ကိရိယာတခုမော်ဒယ် (မော်ဒယ်) အဖြစ်အတုထောက်လှမ်းရေး၏ဘဏ်ခွဲအကွန်ပျူတာကို ရွေးချယ်. - ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်။ အဆိုပါကွန်ပျူတာအာရုံခံကိရိယာ variable တွေကို (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဓာတု, ဇီဝ, etc) ထို actuators (tentacles လှုပ်ရှားမှုဆိုလိုသည် - စသည်တို့ကိုဘီး, သီချင်းများ, ခြေထောက်,) ကဖြည့်ဆည်းစေခြင်းငှါ၎င်း, ဤရှုပ်ထွေးသော device ကိုဖြစ်ပေါ်စေမည် - သိမြင်မှုစက်ရုပ်လ Rover, ယာဉ်မောင်းမပါဘဲတစ်ဦးကိုကား, စတာတွေ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခု - ။ ကျွန်တော်သတင်းအချက်အလက် processing သာဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုကကွန်ပျူတာကိုလိုက်နာဖို့လိုအပျသောကြောင့်ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းယခုမရှိမဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။
သင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြု Programming ဘာသာစကားအတုတရားဝင်ဘာသာစကားများကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဘာသာစကားများ၏အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးသူတို့အပေါ်မှာဘာသာစကားအဆောက်အဦများနှင့်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအတိအကျကိုအနက်ဖွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအတုစိတ္တဇဒီဇိုင်းပါပဲ။ ဤသည် connotations ကိုခေါ်မရေသဘာဝလူ့ (ပြည်တွင်းရေးမရေရာမှုများ), စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသောအဓိပ်ပာယျကအတိအကျအနက်နှင့်အတူဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားထိုးရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်တားမြစ်ချက် (ပယ်ဖျက်) ပြေတတ်နဲ့လူ့ဘာသာရပ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရေရာမှုများတွေ့မြင်သောပြည်တွင်းရေးမရေရာမှုများ, အောင်မြင်နေသည်။ ဤသည်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (မရေရာမှုများ, SUBJECT, စိတ်လှုပ်ရှားမှု) အားလုံးလူ့ပျောက်ကွယ်နေသည်နှင့်ဤပြုခြင်း၏ရလဒ်မိုးနည်းရေရှားကန္တာရ soulless စက်တွေဖြစ်ပါသည် - အတုတရားဝင်ဘာသာစကား (ကွန်ပျူတာ) ။ အဆိုပါအသီးအသီးဘာသာစကားဖွဲ့စည်းပုံမှာ (ကွင်းဆက်သင်္ကေတ) ၏အရေးပါမှုနှင့်ဤဖွဲ့စည်းပုံအသီးအသီးစစ်ဆင်ရေးပြီးရင်တိကျစွာတိုင်းတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့လူတစ်ဦးကိုသူတို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသံသယမရှိဘဲသိတယ်ဒါကြောင့် ie, (သုညပြည်တွင်းရေးမရေရာမှုများနှင့်အတူ) ထွက်ချထားသည်။ အတိအကျဖော်ပြထားဒြပ်စင်နှင့်အတူတ္ထု, အရှင်ကျနော်တို့အတိအကျကိုကမ္ဘာကမခေါ်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤသည်ကွန်ပျူတာဘာသာစကားများ, Turing စက်, ဒါပေမယ့်လည်း mathematics, တရားဝင်ယုတ္တိဗေဒ, အတိအကျဂိမ်း (စစ်တုရင်, Checker, ကဒ်ဂိမ်း, etc), အတိအကျကိုသိပ္ပံကိုသာပါဝင်သည်။ ပြည်တွင်းရေးမရေရာမှုများများတားမြစ်ချက်ကြောင့်သိပ္ပံနည်းကျကမ္ဘာကြီးအတွက်နောက်ထပ်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်:
အတိအကျကမ္ဘာကြီးထက် ကျော်လွန်. အတွင်းပိုင်းမရေရာမှုများဖယ်ရှားခြင်း, ကျွန်တော်တစ်ဦးမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ featuring မရေဘာသာစကားတှငျနထေိုငျလူ့စိတ်ဝိညာဉ်၏လိမ္မာပါးနပ်ပြခံစားရပေမယ့်စွမ်းရည် samohybnosti တီထွင်စဉ်းစားတွေးခေါ်နှငျ့အတူမသာ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအတိအကျကမ္ဘာကြီးအတွင်းတစ်ပန်းအခြ (အခြ) ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ Samohybnosti အခြအရှုံး, အတားမြစ်ထားအတွင်းစိတ်မရေရာမှုများလောကီသားတို့သည်အမှသူမ၏လွှဲပြောင်းရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း soulless စက်မှလူတစ်ဦးကနေတစ်ဦးခြေလှမ်းပင်ဖြစ်သည်; ဒါဟာအိုင်တီအသိထဲမှာကျမဲ့ဖို့အဝေးလူနေမှုကနေခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ deriving ၌။ သင်္ချာမှာတော့ (ကနျ့) ဆက်ဆံရေးရရှိရန်ဆည်းကပ်သောအရာကိုချိန်ညှိသင်္ချာဆက်ဆံရေးမဲတစ်လမ်းရှာနေသူလူ့တစ်ပန်းရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာစာမျက်နှာအတိအကျသိပ္ပံပေါ်တွင်ပြသနေသည်။ အဘယ်အရာကိုကသင်္ချာအတွက်အခြအဘို့အချေနှင့်ကဒ်ဂိမ်းသို့မဟုတ်စစ်တုရင်အတွက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ကတ်များသို့မဟုတ်စစ်တုရင်အပိုင်းပိုင်း၏အဓိပ္ပါယ်များကျွမ်းကျင်တိကျစွာလူသိများသူတစ်ဦးအဖြစ်ဂိမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ Player ကို (တစ်ပန်း) ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီဂိမ်းထဲမှာရွေ့လျားကို select အားမိမိဉာဏ်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာများအတွက်ပရိုဂရမ်သင်္ချာအနကျအဓိပ်ပါယျသို့မဟုတ်အတိအကျဂိမ်းထဲမှာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ပန်းပရိုဂရမ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးချင်းစီအပြီးဂိမ်းသို့မဟုတ်အနကျအဓိပ်ပါယျ step ဒါကြောင့်ပရိုဂရမ်အင်အားစု (သင်္ချာသို့မဟုတ်ကစားသမား) ကားမောင်း၏အခန်းကဏ္ဍကို, ထို (ပရိုဂရမ်) အောက်ပါအဆင့်ကို generate နိုင်တစ်ပန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါကွန်ပျူတာဘဝမချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်တစ်ပန်းပျောက်ဆုံး၎င်း၏မှော်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကတ်များသို့မဟုတ်အပိုင်းပိုင်းတစ်မှော်ပုံကဲ့သို့အချည်းနှီးသောဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမမှော်စက်ရှာသင့်လျော်သောမဟုတ်ဘူး။ တစ်ပန်းမဆိုအမှုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အသိဥာဏ်ပညာစွမ်းရည်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအစက်အပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်း, ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းစဉ်များသတင်းအချက်အလက်နှင့်မတူဘဲ, ဒီခြားနားချက်လှည့်ဖြားမပြုရပါ။ program ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတိအကျကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်, သူ့ကိုစွန့်ခွာလို့မရဘူးသမျှသောအပြောင်းအလဲရှိနေသော်လည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ထိုကဲ့သို့သောဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပင်အသိပညာလှည့်ဖြားစေနိုင်သည်။ စက်၏တံခါးသော့ကိုအင်္ဂါရပ်အရေအတွက် (နှင့်လက်ဖြင့်ချက်များမရရှိတစ်ခါတစ်ရံတွင်တိကျစွာ) ဖြစ်ပါသည်, သရုပျခှဲအဖွဲ့အစည်းများ (အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတင်းအချက်အလက်) နှင့်ဤလှုပ်ရှားမှုအတွက်ပြင်ပ power supply ကိုအသုံးပြုပါ။ opencast သတ္တုတွင်းမှာရေပုံးဘီးတူးဖော်တူးဖော်တွေ့ရှိကျောက်မီးသွေး၎င်း၏အရေအတွက်ကသူ့အလုပ်ကရွေးခြယ်ခြင်းနှင့်ရေမှုတ်များနှင့်အတူလူပေါင်း (လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏) အတွက်တက်မတ်တပ်ရပ်လျှင်မတည်ရှိမယ်လို့အခွင့်အလမ်းများဖွင့်ဖွင့်လှစ်။ စက်အရေအတွက်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် (လူသားတစ်ဦးနဲ့နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆင်ရေး၏မြန်နှုန်း) သတ္တုတွင်းသို့မဟုတ်သတ္တုဓာတ်အပြောင်းအလဲနဲ့သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဖြစ်စေ, စစ်ဆင်ရေးမဟုတ်ရင် unfeasible နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ထို့ကြောင့်တူရိယာ - မော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်အတုထောက်လှမ်းရေးရှိပါတယ်တဲ့ကွန်ပျူတာ။ ဒါဟာဘာသာစကားများ (နှင့်အရှင်ကွန်ပျူတာ) programming ကြောင့်စိတ်တွင်ဘွားမြင်ခြင်းကိုခံရမည်အတိအကျကမ္ဘာကိုပိုင်သူတို့အပေါ်မှာဘာသာစကားအဆောက်အဦများနှင့်စစ်ဆင်ရေးများ၏အဓိပ္ပါယ်များနှင့်အတူဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည့်စုံသောလူ့ psyche ရှိနေစဉ်အတိအကျစက်နှင့်အတိအကျတည်ရှိသည်ဖြစ်ကြသည်။
Artificial Intelligence သူတို့ကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာဆက်စပ်သို့မဟုတ်မရှိမရှိနှင့်အညီ, နှစ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာနှင့်ဆက်စပ်သောကြသည်မဟုတ်သူများသည်သူတို့အတိအကျကိုကမ္ဘာကဖြစ်ကြသည်။ အတိအကျဂိမ်း (အတိအကျကိုကြည့်ပါ) သို့မဟုတ်သင်္ချာအထောက်အထား (theorem ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း) ဥပမာဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအရှင်ကမ္ဘာကြီးအတိအကျကမ္ဘာ၏အတိအကျမော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး, မော်ဒယ်မော်ဒယ်တစ်ပန်းရန်အဓိကအားဖြင့်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ အကျော်ကြားဆုံးမော်ဒယ်ကျွမ်းကျင်သူစစ်တုရင်ရွေ့လျား။ အဲဒီမှာတင်းကျပ်အတားအဆီးတစ်ပန်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဥပမာမော်ဒယ် (စသင်္ကေတကိုကြည့်ပါ) algorithms များရှုပ်ထွေးကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ စစ်တုရင်အတွက်ကိန်းဂဏန်းများ၏ပေါင်းစပ်သဘောထားအရေအတွက်, ဒါမှမဟုတ်အတုထောက်လှမ်းရေးမော်ဒယ်များအခြားပြဿနာများကို။
သူတို့ကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာနှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများဖြစ်သည့်အခါအခြေအနေကထပ်မံရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျနှင့်စစ်မှန်သောကမ္ဘာကြီးအကြားလူပျိုတံတား variable ကို (စက်မှုခွန်အားကိုဖြေရှင်းနည်းအတွက်အိုင်းယွန်းအာရုံစူးစိုက်မှု, အလင်းရောင်များ၏ပြင်းထန်မှု, etc .. ) ဟုခေါ်သည့်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအတိအကျကမ္ဘာကြီးအတိအကျ delineated ကြောင့်မဆိုသံသယမရှိဘဲလယ်ပြင်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်လူတိုင်းက၎င်း၏အရေးပါပုံကိုသိနိုင်အောင်, ဆိုလိုသည်မှာ, (မိမိတို့၏အနက်သုညပြည်တွင်းရေးမရေရာမှုများနှင့်အတူ), နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤကမ္ဘာမှဘုံဖြစ်ပြီး, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီး၌ဤလောကသို့ထားတဲ့မူလတန်းတိုင်းတာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖြစ်ပါသည် ဒါသည်၎င်း၏တိုင်းတာမူလတန်းကိုယ်စားလှယ်။ ဒါဟာအတိအကျသိပ္ပံများ၏အုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာနှင့်ဆက်စပ်အတုထောက်လှမ်းရေးပြဿနာများနှစ်ခုအမျိုးအစားခွဲခြားထားရမည်။
ဤအမှု၏ပထမဦးဆုံးမော်ဒယ်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုအတုထောက်လှမ်းရေးအသိပညာဒီတော့တယောအစုံ (ပုံသေ) အသိပညာကိုဝှကျထားနောက်ခံအသိပညာပိုမိုတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဆင်းသက်လာပေမယ့်သူတို့ထံမှဆင်းသက်လာနိုင်ဖြစ်သင့်အသုံးပြုသည်။ ထိုသို့သောမော်ဒယ်ကျွမ်းကျင်သောသည့်စနစ်ဟုခေါ်သည်။ ဒီ model တစ်ခုအတိအကျကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရပါမည်ကတည်းကဒါဟာအသိပညာတစ်ခုအတုတရားဝင်ဘာသာစကား (သင်္ချာ, တရားဝင်ယုတ္တိဗေဒ, programming language ကို), အတိအကျကိုအနက်နှင့်အတူဘာသာစကားတစ်ခုကို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထားပြီးကြောင်းလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်ကမရေစိတ်ခံစားမှုနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်အတူသဘာဝဘာသာစကားမဖွစျနိုငျ အနက် - connotations ။ ဒါဟာအသိပညာတစ်ခုအတိအကျသိပ္ပံ အသုံးပြု. ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအသိပညာသည်သဘာဝကိုသဘာဝဘာသာစကားတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆို, မရေပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်စိတ်ခံစားမှုလူ့အသိပညာရရှိခဲ့သူတို့အတိအကျကိုအသိပညာပေးဖို့လွှဲပြောင်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်, အတိအကျကိုတရားဝင်ဘာသာစကားဝိုးတဝါးတွေ့မြင်ကိုဖော်ပြရန်။ အတိအကျကမ္ဘာကြီးတစ်ဦးကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါပြီမယ်လို့အချက်, လျှောက်ထားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတိအကျဤလောကသို့ဖြည့်စွက်သည့်သဘာဝဘာသာစကား၏ဘာသာစကားဖွဲ့စည်းပုံမှာ (သင်္ချာ, တရားဝင်ယုတ္တိဗေဒ, ဘာသာစကား programming) လျှင်, ငါတို့သည် (၎င်းတို့၏သဘာဝအလူရဲ့တာဝန်ပေးအဓိပ္ပာယ်ကိုအရှုံးမပေးရန်ရှိသည်က နိုင်စွမ်းလူ့ psyche) သာ။ ထိုသို့သောဘာသာစကားဖွဲ့စည်းပုံမှာသင်္ကေတတစ်ခုခုကို string ကိုအဖြစ်လုပ်ငန်းများ၌, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့သဘာဝကအနက်ဖွင်မပါဘဲနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်စေအတုထောက်လှမ်းရေး၏ဖန်ဆင်းခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရဲ့အစမှာတစ်ဦးအတိအကျကိုဤလောကသို့ဝင်၏ဖျောပွဖြစ်နိုင်ခြေလျစ်လျူရှုဖြစ်ကောင်းအဝိဇ္ဇာကနေ, ဒါမှမဟုတ်သဘာဝအဘာသာစကား, ဆင်းသက်လာသည့်သဘာဝလူ့အသိပညာအတွက်ကိုယ်စားပြုအသိပညာသုံးစွဲဖို့လှဲမှားသောကြိုးစားမှုသည်ထင်ရှား။ ,
အစစ်အမှန်ကမ္ဘာနှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများကို၏ဒုတိယအမျိုးအစားအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကိုထုတ်လုပ်ဖြစ်စဉ်ကြောင်းလူ့ထောက်လှမ်းရေး, အထောက်အကူပြုကြောင်းvnitropsychickéဖြစ်စဉ်များရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များမူလကပင်ဗျာဒိတ်ဝိုးတဝါးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမအတိအကျတံတားရှိပါတယ်နေကြတယ်, variable ကိုဖြစ်သည့်ဖျောပွတံတားသည်ပြည်တွင်းရေးမရေရာမှုများအပေါ်တစ်ဦးပိတ်ပင်မှုလိုအပ်တယ်, ကvnitropsychickýchဖြစ်စဉ်များမွေးရာပါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သအထက်တွင်သတ်မှတ်ထားသောအရာအတုထောက်လှမ်းရေး၏ဌာနခွဲ: အသိဉာဏ်လူ့လှုပ်ရှားမှု၏ပြင်ပသရုပ်မော်ဒယ်ကြောင့်ပင်ငါမ tools များရှိသည်, မကြိုးစားနေပါတယ်။ သို့သော်သင်ဆဲအာရုံကြောကွန်ရက်များမော်ဒယ်အတုထောက်လှမ်းရေးဦးဆောင်တဲ့စစ်ဆင်ရေး၏ဒုတိယဌာနခှဲကမှတ်သားရပေမည်။ မြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့လုပ်, ဒါပေမယ့်ဒီမော်ဒယ်လူ့ဦးနှောက်၏စစ်မှန်သောလှုပ်ရှားမှုဆုံးခနျ့မှနျးနိုငျသညျ့မှအတိုင်းအတာသည်မွေးရာပါမရေရာမှုများနှင့်အတူပြည်တွင်းရေးဖြစ်စဉ်များဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ, အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု၏ပထမဦးဆုံးသင်္ချာပုံစံက y အတွက် Warren မက်ကူလော့နဲ့ Walter Pitt မိတ်ဆက်ပေးသည်။ 1943 ။ ဒါဟာ (သင်္ချာ) မော်ဒယ်အတိအကျကမ္ဘာကြီးကိုပိုင်ဆိုင်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, လူအပေါင်းတို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်ဤနည်းတစ်အာရုံခံဆဲလျ၏မူလရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံသွားကြသည်, သို့သော်အသွင်ပြောင်းသည် ပို. ပို. ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများကို (ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်စာရေးသူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတှေ့အကွုံအရ) ကြောင့် သို့သော်တစ်ဦးသင်္ချာ (ကွန်ပျူတာ) မော်ဒယ်ကမ္ဘာ၏စံပြမရေအတိအကျအတွင်းစိတ်တားမြစ်သည်။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာအမှန်တကယ်မူလကပင်မရေဖြစ်စဉ်များအတိအကျကိုကမ္ဘာကတစ်သင်္ချာဘာသာစကားသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာလုပ်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးအီလက်ထရွန်အဏုအောက်မှာထွက်သယ်ဆောင်အာရုံခံ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လှုပ်ရှားမှုအလွန်စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာမှု, Prof ကပြောပါတယ်။ သူ့စာအုပ်အတွက်စတူးဝပ် Hameroff ။ အဆိုပါအာရုံခံဆဲလျခုနှစ်တွင်အဓိကအားသည်အခြားအာရုံခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ထုံးစံ (အသိဉာဏ်) ဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အသုံးပြုသောအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်သောပမာဏ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပြုအမူရှိခြင်းဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကို 100 ဘီလီယံလူ့ဦးနှောက်တွင်ဤအာရုံခံ။ လူ့ဦးနှောက်၏မူလကပင်မရေဖြစ်စဉ်များအတိအကျကိုကမ္ဘာကလုပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဇီဝသဘာဝကတခြားမော်ဒယ် tools တွေကိုရှာလိုအပ်ပေသည်။ မရေရာမှုများ vnitropsychickou ရန်၎င်း၏မွေးရာပါချိတ်ဆက်နှင့်အတူVnitropsychickéဖြစ်စဉ်များဥပမာ, အစစ်အမှန်လောကရှိဖြစ်ပေါ်အားလုံးယခုတိုင်အောင်လေ့လာခဲ့ဖြစ်စဉ်များကှာခွား။ ရူပဗေဒ, ဓာတုဗေဒ, etc အသစ်သောနည်းလမ်းတွေရှာဖွေရေးနှင့်အမျှ (ဒီအခြေအနေမျိုးအတွက်, လမ်းကြောင်းကနေဘေးဖယ် step အစီအစဉ်တအတုထောက်လှမ်းရေးကွပ်ထားတယ်) ထို့ကြောင့်ကြိုးစားမှုရှိပါတယ် တိုက်ရိုက်လွှဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံဥပမာကိုသုံးပါ။ ကြွက်, အစားအာရုံကြောကွန်ရက်များ၏ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များ။ ဤရွေ့ကားဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံဥပမာပါဝင်သည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက် processing များအတွက်အတု (ကွန်ပျူတာ) စနစ်များပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သင့်လျော်သော interface ကိုမှတဆင့်နထေိုငျကွသညျ။ သိမှုစက်ရုပ်။
- algorithms များရှုပ်ထွေး
- အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှအကြောင်းအရာများသည်သာသင်္ချာ (programming language ကို) အဖြစ်စာဖြင့်ရေးသားအတုဖျော်ဖြေရေးအတိအကျသိပ္ပံအားဖြင့်ရရှိခဲ့သည့်အသိပညာ, သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ဖြစ်ပါတယ် variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သငျသညျမူလကပင်မရေအသိပညာ, မရေပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုသဘာဝဘာသာစကားကိုယ်စားပြုသဘာဝလူ့အသိပညာဝယ်ယူအသုံးမနိုင်။ ဒါဟာတရားဝင်ဘာသာစကားသို့ပြောင်းလဲမရပါ။ အတုဖျော်ဖြေရေးအတိအကျသိပ္ပံဖြင့်ရရှိသောနှင့်လူ့အသိပညာ၏သာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဤအမှု၌အတုထောက်လှမ်းရေး၏သက်ဆိုင်မှုအလွန်ကန့်သတ်ခံခဲ့ရသောအမှန်တကယ်ကမ္ဘာ၏သာအသိပညာကိုကိုယ်စားပြုနိုင်စွမ်းအတုတရားဝင်ဘာသာစကား, ကတည်းက။
- အမွေးရာပါမရေရာမှုများvnitropsychickýchဖြစ်စဉ်များ။ ကွန်ပျူတာ - ကကမ္ဘာကြီးတောင်းဖို့လုပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်နိုင်အောင်, လူ့ဦးနှောက်၏မူလကပင်မရေဖြစ်စဉ်များvnitropsychickéဖော်ပြရန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှဘာသာစကား tool ကိုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အတိအကျကိုကမ္ဘာကလုပ်ပါတယ်ပင်အာရုံကြောကွန်ရက်များလုံလောက်စွာအစစ်အမှန်လောကရှိဖြစ်ပေါ်အမှန်တကယ်မူလကပင်မရေလူ့ psyche ဖြစ်စဉ်များပုံစံဖို့လုံလောက်တဲ့မကျမည်အကြောင်း - လူ့ဦးနှောက်ကို။
ဓာတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေများကိုဖော်ပြရန်, ဖြစ်ကောင်းဟာသူ့ရဲ့အဓိကမှာထဲကဓာတုပစ်စညျးဖြစ်စဉ်များ - လူ့ psyche ၏မွေးရာပါမရေဖြစ်စဉ်များသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောရှိသည်။ တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စဉ်များမွေးရာပါမရေရာမှုများအတွက်နိယာမအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်ကြောင့်လူ့ဦးနှောက်၏ဇီဝသဘာဝထက်ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသဘောသဘာဝအတွက်သူတွေဟာကဤလုပ်ငန်းစဉ်များတုရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအခြေခံမူများပေါ်ထွန်းအတွင်းပိုင်းမရေတားမြစ်ထားသောမဟုတ် environments ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်အိုင်တီသဘောအရအသက်တာ၏အခြေခံမူနားလည်သဘောပေါက်။
Související informace naleznete ယူčlánkuTuringůvစမ်းသပ် v ။
na tomto srovnáníspočíváယူmyšlenka Turingova testu, kterou vyjádřil informatik လန်ကျူရင်း roce 1950 "စက်ပစ္စည်းနှင့်ထောက်လှမ်းရေးကွန်ပျူတာ" svémčlánku့။ zkratce tvrdí့, Ze za inteligentnímůžeme stroj prohlásit, nerozeznáme-li jeho lingvistickývýstup od lingvistickéhovýstupučlověka။
အငြင်းအခုံčínského pokoje je častopokládán za protiargument ဋ Turingovu testu ။ mohl existovat stroj အားဖြင့် ze Uvažuje, všechnymožnéotázky, aniž nad čímkolivအားဖြင့် "přemýšlel" na inteligentníchování simuloval připravenou sadou reakcíအားဖြင့်který။
Související informace naleznete ယူ v článkuGeneticképrogramování။
Související informace naleznete ယူ v článkuExpertníစနစ်။
Expertní SYSTEM je počítačovýအစီအစဉ်který Ma za úkol poskytovat expertní rady, rozhodnutíနေဗောdoporučitřešení v konkrétní situaci ။
Expertnísystémy jsou navrženy tak, aby mohly zpracovávatnenumerickéတစ်neurčité informace တစ်řešit tak úlohy, které nejsou řešitelnétradičnímialgoritmickými postupy ။
Související informace naleznete ယူ v článkuProhledávánístavového prostoru ။
Zvláště PRI vytvářeníalgoritmů (šachů, dámy) se jevíúčelné zadefinovat si množinustavůသူမ၏klasickýchřešení na, kterých se můžemeပြုပါငြ် dostat, přípustné tahy neboli přechody mezi stavy တစ်počátečníတစ်koncové pozice ့။ Hledáme pak cestu od počátečníchstavů ke koncovýmstavům, kteréznamenají NAS úspěch။
Jelikož mohou býtstavové prostory rozsáhlé av အněkterýchpřípadechဈnekonečné, je třebaကုသိုလ်ကံchytré metody ořezávánínevhodných cest တစ်ohodnocování pozic (napříkladငြ် go ့) ။
Související informace naleznete ယူ v článkuဒေတာများသတ္ထုတူးဖော်ခြင်း။
Velké soubory dat (častouložené v databázích) o nějakémsystému nejsou použitelnéတစ်pochopitelnépřímo့kdyžobsahují informace တစ် vzory chovánísledovanéhosystému။ Metody dobýváníznalostípřevádíဒေတာkompaktníတစ်explicitní formy popisujícíစနစ်, která je lépepoužitelnáလုပ်ပါ။
ကျယ်ပြန့်အသိထဲမှာမဟုတ်ဘဲရုံအချက်အလက်များ၏မူလတန်းအပြောင်းအလဲနဲ့ (နံပါတ်များ, ညှို့, အမျိုးအစားဒေတာ), ဒါပေမယ့်လည်းအသံက၏အပြောင်းအလဲနဲ့, ရုပ်ပုံများ (ဒီဂျစ်တယ် image processing တွင်) ဗီဒီယိုကသဘာဝဘာသာစကား၏ (ကြည့်ရှု, သဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့, Corpus) နှင့်ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒဒေတာ (ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒ) ။
Výstupy jsou různéလိုလားသူrůznéúlohyတစ်závisídokážeme vydolovat čemu je chceme použítတစ်ပူးတွဲ (က jak kvalitně) k, Tom na taky ။
Roku 1979 překonalpočítačsvětového mistra ငြ်vrhcáby့။
စစ်တုရင်၏တော်ဝင်ဂိမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ပညာပေးဘာသာရပ်၏အစအဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ အစကတည်းကအနေဖြင့်ပြဿနာဖြေရှင်းထောက်လှမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ပေမယ့်အနိုင်ရတဲ့ပိုပြီးထောက်လှမ်းရေးမဆိုလိုပါ။ 1997 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Garry Kasparov နန်းသက်ကို IBM ကနေနက်ရှိုင်းသောအပြာရောင် system ကိုလုပ်ကြံ။ အပြာရောင်နက်ရှိုင်းပေမယ့်အစား accelerators တွက်ချက်မှုနဲ့မျိုးစပ်မှုစနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနီးပါး brute အင်အားသုံးဖြေရှင်းနည်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ AI အမရှိတော့အောင်မြင်သောဖြစ်ခြင်းစဉ်အများအပြားရာထူးကတဆင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။
Chinook je အစီအစဉ်ကိုလိုလားသူhraníanglickédámy, jehožtvůrci v červenci Roku 2007 prohlásili, Ze nemůžeprohrát။ Jižpředtímpravidelněporážellidské oponenty ပါစေněkolik။ Tohoto výsledku bylo dosaženokombinacíhrubésíly PRI prohledávání pozic středníčásti hry တစ် dobrou databázízahájeníတစ် koncovek ့။
Počítačové programy hrající nevedly si často tak dobřeသွားပါ။ je tomu tak zřejmě proto, Ze je goban (deska go na) je poměrněrozsáhlákaždýmdalšímpoloženým kamenem stoupá komplexita rozhodování, kterou všakmajílidéšancizvládnoutdíkysvévrozené schopnosti rozpoznávánítvarůအဖြစ်။ Ovšemnejlepší programy používající jak řešení hrubou silou (přesnějistromovéprohledávání), tak intuici, jsou schopnéporážet (2016) ဈ mistry ။
Leteckábojováumělá inteligence ALPHA dokážeအင်္ကျီletecké souboje lépe Nez lidští piloti ။
Jistéúlohyလိုလားသူinteligenční testy je AI အ schopna řešitlépe Nez většinalidí။
AI အ je ယူ schopna zvládnoutzrcadlovýစမ်းသပ်sebeuvědomění။
AI အ je schopna určit riziko selhání srdce lépe Nez doktor ။
AI အumožňuje snadno napodobovat lidské hlasy ။
အဆိုပါပြဿနာ AI အအနက်ရောင်သေတ္တာများကဲ့သို့ပြုမူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့နားမလည်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအထက် (မတ်) ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသောတစ်ခုမှာမဖြစ်မနေရလဒ်များ, ဆင်ကန်းတောတိုး, ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်တောင်းဆိုပြီးနောက်အယ်လ် (Xai) ကရှင်းပြသည်။
AI အလူ့သိမြင်ပုံပျက်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဒါဟာသို့သော်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘက်လိုက်မှုမိတ်ဆက်ပေးနိုငျသညျ။ လူ့ခြင်းနှင့်အတုတှေးအချေါနှငျ့အရှင်လှည့်ဖြားနိုင်ပါ။
ယဉ်ကျေးမှု၌ Artificial Intelligence
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စက်သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်စာရေးဆရာများများအတွက်ရေပန်းစားခေါင်းစဉ်ဖြစ်ကြသည်။ ဣဇာက်သည် Asimov ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်, သူ့အတိုဇာတ်လမ်းများ themes များစက်ရုပ်ထောက်လှမ်းရေး, သူ့အတိုပုံပြင်စုဆောင်းခြင်းငါစက်ရုပ်အဖြစ်ရေတိုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အဆိုပါ Bicentennial က Man တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမြှုပ်နှံ။
ပိုလန်စာရေးဆရာ Stanislaw Lem ကသူ့စာအုပ်တွေ (နောက်တဖန်တစ်ရုပ်ရှင်သို့ခဲ့သောနှစ်ကြိမ်) Kyberiádaနှင့် Solaris အတွက် nonhumans များအတွက်ထောက်လှမ်းရေး၏ဒဿနရှုထောင့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ စက်ထောက်လှမ်းရေး၏အချို့ရှုထောင့်နှင့်စာအုပ် Golem XIV ဖျက်သိမ်း။
အမှန်စင်စစ်လက်ရှိစတိုင်သိပ္ပံစာပေကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု cyberpunk မူလကပင်အရှင်အသိဉာဏ်စက်တွေရဲ့စိတ်ကူးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, လူ့ခြင်းနှင့်စက်၏ထိုးဖောက်မှုဂုဏ်သတ္တိများအဖြစ်အညီအမျှကောင်းစွာချည်နှောင်။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဝီလျံ Gibson အားဖြင့်စာအုပ် Neuromancer ။
မူလကလူကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအတုထောက်လှမ်းရေးကလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကမ္ဘာ၏ပုံပြင်ကိုပြောပြကြောင်းအစောပိုင်းရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအများဆုံးထိခိုက်နစ်နာ Matrix trilogy ပာအတွက်ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေခေတ်ရေစီးကြောင်း။ ရုပ်ရှင်တွေက Terminator နှင့် Blade ကို Runner ကဲ့သို့သြဇာအဟောင်းများအကျင့်ကိုကျင့်များထဲတွင်။
ဗီဒီယိုကိုဖနျဆငျး & Artificial Intelligence →